Abantu Lokhu Behlolwa Betholakale Belegciwane leCOVID-19
Mfumfu 04, 2020
Kulabantu abafika phose amatshumi amathathu – 27 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belegciwane leCOVID-19.
Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle lubika ukuthi lokhu sokukhuphule inani labantu abalomkhuhlane lo layafika inkulungwane eziyisitshiyangalombili – 7,882. Phakathi kwabantu laba, abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa – 6,327 sebaphepha kumkhuhlane weCoronavirus elizweni. Sokwabhubha abedlula amakhulu amabili – 228.
Odokotela baxwayisa abantu ukuthi belimuke ngoba lokhu umemetheka umkhuhlane lo eZimbabwe lakwamanye amazwe lapho osogulwe ngabedlula izigidi ezingamatshumi amathathu – 35 million, wabulala abedlula kancane isigidi – 1,034,185.
Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kwele Melika sebesedlula izigidi eziyisikhombisa – 7,3 million abantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane amakhulu amabili - 209,408.
Ukuze sihlaziya udaba lolu, sixoxe lodokotela Xolani Ndlovu, osebenza esibhedlela seMpilo Hospital koBulawayo, othi umkhuhlane lo ulakho ukubulala abantu abanengi uzulu engekela ukunanzelela akwenzayo ekuvimbeni ukuthi ungamemetheki.